Liiska magacyada xildhibaanada uu u hanjabay Gen. Gabre - Caasimada Online
Home Warar Liiska magacyada xildhibaanada uu u hanjabay Gen. Gabre
Liiska magacyada xildhibaanada uu u hanjabay Gen. Gabre
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida aan dhawaan shaacinay Basaaska Dowlada Ethiopia u qaabilsan kala geynta Soomaalida Gen. Gabre ayaa Hanjabaado dil ah u jeediyay Xildhibaano ka kala tirsan labada Aqal ee dalka.
Gen. Gabre ayaa Xildhibaanadaasi oo mucaarad ku ahaa Xasan Sheekh ugu goodiyay inuu u maleegi doono qorshayaal dil ah, waa haddii aysan dooran Musharaxa ay wadato Dowlada Ethiopia.
Xildhibaanada uu u hanjabay Gen. Gabre ayaa badi ka tirsanaa Garabka isbedel doonka ah ee soo saaray Madaxweyne Farmaajo oo 8 Feb 2017 loo doortay xilkaasi.
Shabakada Caasimada Online ayaa waxaa u suuragashay inay hesho qaar kamid ah Xildhibaanada loogu hanjabay dilka oo tirro ahaan dhan 30 Xildhibaan, waxaana noo suuragashay inaan helno Xildhibaanada kala ah:
4- Xil. Maxamed Cali Cumar ”Caananuug” oo laga soo doortay Jubbaland.
6-Cabdirizak Cisman Xassan ”Jurile” oo laga soo doortay Puntland.
13- Xil. Xildhibaan Zakariye Xaaji Cabdi
Xildhibaanadaani kor ku xusan ayaa diiday inay u codeeyan Musharaxa ay wadato Dowlada Ethiopia, iyagoo ka duulaaya in Dalka uu ka baxo gumeysiga.
Xildhibaanadaani ayaa taa bedelkeeda doorbiday inay codka siiyaan Madaxweyne Farmaajo, iyagoo Gen. Gebra tusaaya inuusan laheyn awood.